Ahoana no ahafantarana raha nisy nanakana anao tamin'ny Whatsapp 2021
Ahoana no ahalalanao raha nisy nanakana anao Whatsapp
Raha mandefa olona hafatra WhatsApp ianao, nefa tsy mahazo valiny, dia mety manontany tena ianao hoe voasakana ve ianao. Eny, tsy tonga mivantana ny WhatsApp ary milaza an’io, saingy misy fomba roa hamantarana izany.
Jereo ny antsipirian’ny fifandraisana amin’ny chat
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny manokatra resaka amin’ny fampiharana WhatsApp ho an’ny iPhone na Android ary avy eo mijery ny antsipirian’ny fifandraisana eo an-tampony. Raha tsy hitanao ny sarin’ny mombamomba azy ireo sy ny endrik’izy ireo farany, azo inoana fa nanakana anao izy ireo.Ny tsy fisian’ny sary avatar sy hafatra hita farany dia tsy antoka fa nosakanany ianao. Ny fifandraisana nataonao dia mety nanala ny hetsika farany hitan’izy ireo.
Andramo mandefa SMS na miantso
Rehefa mandefa hafatra any amin’ny olona nanakana anao ianao, dia tsy misy afa-tsy ny mari-pamantarana iray. Ny hafatrao dia tsy hahatratra ny WhatsApp an’ny fifandraisana raha toa ka nandefa hafatra alohan’ny nanakanany anao ianao dia hahita mari-pamantarana roa fa afaka manandrana miantso azy ireo ianao. Raha tsy mandeha ny antsonao dia midika izany fa mety voasakana ianao. WhatsApp dia hametraka ny antso ho anao tokoa, ary ho renao fa maneno izy io, saingy tsy hisy haka amin’ny faran’ny iray hafa.
Andramo ampiana azy ireo amin’ny vondrona iray
Ity dingana ity dia hanome anao ny famantarana azo antoka. Miezaha mamorona vondrona vaovao ao amin’ny WhatsApp ary ampidiro ao anaty vondrona ilay fifandraisana. Raha milaza aminao ny WhatsApp fa tsy afaka nampiditra ilay olona tao amin’ilay vondrona ny fampiharana dia midika izany fa nosakanany ianao.